Romson: waa aqbalayaa haddii lay beddelo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
La daabacay tisdag 3 maj 2016 kl 16.22
Mursel Isa:Ma u malaynayo in uu jiro qof doonaya qabashada xilkan
sawir: Maja Suslin/TT
Åsa Romson oo ka mid ah guddoonka xisbiga Miljöpartiet ayaa hoggaanminta xisbiga ka hari doonta haddii guddiga doorashada ku taliyaan in jagada hoggaaminta xisbiga loo dhiibo haweeney kale. Sidaas ayey Åsa Romson saakey ku sheegtay wareysi laanta P1-Morgon la yeelatay.
- Anniga iyo Fridolin waxaan caddeynay in guddiga doorashada ay furaan qorsha isbaddel oo ah mid aan ku kalsoonahay oo aan ognahay in ay u sameynayaan sida ugu wanaagsan. Iyaga ayaa ku haboon in ay sameeyaan qiimeyn isku geyn ah oo la xiriirta arragtiyada iyo fikradaha ka soo yeeray qaar ka mid ah xisbiga. Waxaan qabnaa in ayaga u taalo hoggaamiyaasha ay tahay in lagu doorto kulanweynaha xisbiga. Fartiintasna horey waan u gudbinay, waxaana ku talo jirnaa in aan taagerada siino cidda guddiga doorashada ku taliyaan in hoggaanka loo dhibo, ayey Åsa Romson oo saakay laga wareysanayey laanta p1-Morgon ee raadiyahan Sweden.
Todobaadyadii ugu denbeeyey waxaa isa soo tarayey dalabyo ka soo yeerayey qaar ka mid ah xisbiga Miljöpartiet ee la xiriira in la beddelo hoggaanka xisbiga, gaar ahaan in la beddelo Åsa Romson, madaame sida ay sheegeen ku kalsooneyn qaabkeeda hoggaamin.
Hadaba hadal saakay ka soo yeeray Åsa Romson ee ah in ay diyaar u tahay in ay ka harto hoggaaminta xisbiga haddii haweeney kalo lagu beddelo, ayaa waxay ka micno tahay waxaan weydiinay Mursel Isa oo ah xubin ka tirsan golalaha fulinta ee xisbiga.
- Haddii guddiga doorashada uu soo jeediyo in qof kale oo ku haboon jagada hoggaaminta xisbiga, ayey ulajeedaa Åsa Romson oo leedahay anniga dhinac baan u beyrayaa oo waan aqbalayaa, ayuu yeri .
tisdag 3 maj 2016 kl 07.31